Maamulka Juba Oo Milateriga Kenya Ka Jecel Ciidamada Ka Socda Dalalka Kale Ee Afrika – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
27th January 2014 A warsame Af Soomaali 0
Kismaayo – Mareeg.com: Maamulka KMG ah ee JUBA ayaa muujiyey sida uu milateriga Kenya uga jecelyahay ciidamada kale ee ka socda dalalka Afrika ee ka mid ah howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM.
Maamulka Juba ee uu hogaamiyo Axmed Madoobe ayaa shalay magaalada Kismaayo ku abaabulay debadbax lagu taageerayey ciidamada Kenya ee halkaas ku sugan, kadib markii ay soo baxeen in laga yaabo in ciidamada Kenya lagu badelo ciidamo kale oo Afrikaan ah.
Afhayeenka Maamulka KMG ah ee Juba C/naasir Seeraar ayaa difaacay joogitaanka Ciidamada Kenya ee deegaanada Jubooyinka, isagoo ku tilmaamay inay yihiin ciidamo wanaagsan oo wax badan ka qabtay deegaanada ay ku sugan yihiin ee Jubooynka ka mid ah.
Seeraar ayaa ku andacooday iney adkaan doonto sida ay ula shaqeynayaan ciidamo Afrikaan ah oo aan aheyn kuwa Kenya, wuxuuna ku tilmaamay milateriga Kenya ciidamo aqlaaq wanaagsan, lana qabsaday shacabka Jubooyinka, una fidiya kaalmooyin caafimaad.
“Haddii la badelo ciidamada Kenya waxaa adkaan doonta sida aan ula shaqeyno ciidamo kale” ayuu yiri C/naasir Seeraar oo tilmaamay in ciidamada Kenya markii ay soo galeen Soomaaliya ay qabteen shaqo aad u wanaagsan sida uu yiri.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya inuu socdo qorshe Ciidamada Kenya loogu bedelayo ciidamo kale oo Afrikaan ah, waxaana la rumeysan yahay in hadii taas dhacdo in Maamulka KMG ah ee Juba ay saameyn ku yeelan doonto, maadaama maamulkaas si dhow xiriir u leeyihiin Ciidamada Keya.
Dalka Sierra Leone oo ciidamo ka joogaan Kismaayo ayaa horraanta bisha February ee 2014 lagu wadaa inuu hoggaanka Waaxda 5-aad ee Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM kala wareego taliyaha ciidanka Kenya ee qeybta ka ah AMISOM.
Muqdisho: Guryaha Oo Lambaro Loo Sameynayo & Wadooyin Magacyo La Siinayo